Liyuuga Kililka oo maleeshiyada Oromadu uga itaal roonaatay dagaaladii u dambeeyay. | ogaden24
Liyuuga Kililka oo maleeshiyada Oromadu uga itaal roonaatay dagaaladii u dambeeyay.
Waxaa Todobaadkii 2-aad Galay dagaalada Fool ka Foolka ah ee u dhexeeya maleeshiyaadka Liyuuga loo Yaqaano ee maamulada Somaalida iyo Oromada, kuwaasi oo dagaalo khasaare badan Gaystay ay ku dhex mareen dhul aad u kala Fog.
Wariyaha Ogaden24 e magaalada Jigjiga ayaa sheegay 3-kamida dagaaladii u dambeeyay ee dhex maray 2-da maleeshiyo maamul in khasaare xoogan lagu Gaadhsiiyay maleeshiyada Kililka 5-aad, waxaana Jabka maleeshiyada si iskumid ah looga dareemay inta badan magaloyinka waawayn ee Ogadenia.
Boqolaal maleeshiya oo sida wariyuhu sheegay looga itaal roonaaday dagaal 14-kii bishan kadhacay Galbeedka magaalada Salaxaad, ayaa firxad badan oo maleeshiyada Liyuuga katirsan waxaa u Gurmaday dadka shacabka ah ee deegaanka, waxaana qaar badan oo maleeshiyada ah lahelay iyaga oo daadiyay Qoryihii ay wateen.
Magaalada Baabili duleedkeeda 54-maleeshiyada Liyuuga ah oo maamulka Kililku Geeyay ayaa Gabi ahaan Hub kudhigis waxaa kusameeyay maleeshiyada Oromada oo Garab kahelaya ciidamada Woyanaha ee magaalada Baabili oo uu xukumo Taliye kasoo Jeeda Qomiyada Amxarada.
Sida wariyuhu sheegay ciidamada Hub kadhigista lagu sameeyay ayaa Qayb ka ahaa maleeshiyadii dagaalka kula gashay maleeshiyada Oromada deegaanka Koore, waxaana dagaalka kadhacay Koore looga maleeshiyada Oromada oo baqihii u galay ciidamada Woyanaha.
Hub kadhigta lagu sameeyay maleeshiyadan kudhowaad 60-ka ah ayaa siwayn u Gilgishay magaalada Jigjiga waxaana warku sheegayaa in saraakiisha ciidamada Woyanaha Jigjiga oo arinka lasocda aysan wali wax Talaaba ah Qaadin, taasi oo muujinaysa inay aad ula dhacsan yihiin sida wax u socdaan.
Dhinaca Gobolka Afdheer oo isna dagaalo khadhaadhi ay kudhex marayaan Labada maleeshiyo maamul ayaan xog dhab ah lagahayn, balse wararka magaalada Jigjiga Yaala ayaa ah in dagaalada Aagaasi oo ay Qayb kayihiin shacabka deegaanku ay ku Gacan sareeyaan maleeshiyaadka Somaalidu.
Dagaalada u dhexeeya Soomaalida iyo Oromada oo si saf balaadhan ah uga socda inta badan deegaamada ay Labada Qomiyadood wadaagaan, ayaa waxaa dabada kariixaya Taliyayaasha ciidamada Woyanaha oo Qorshahoodu ugu muhiimsani yahay in kacdoonkii Oromada kala soo Horjeeday kooxda TPLF uu meesha kabaxo.